Ezemidlalo, 11 Nhlangula 2019
ngoLwesibili 11 Nhlangula 2019
Nkhwenkwezi 24, 2019
IBulawayo City Isilihlezi Phezu Kwengalane Yemiklomelo kuSouthern Region Division One
Phakathi kwamaqembu athi ele Talen Vision kanye lele Bulawayo City yikho lapho okukhangelelwe ukuba kungaphuma khona iqembu elizathola ilungelo elokuyadlala kusigaba se Premier Soccer League ngomnyaka ozayo lisuka kusigaba se Southern Region Division One.
Nkhwenkwezi 17, 2019
Madinda: Akula Kuxabana Phakathi Kwabaqeqetshi beHighlanders
Ukudlala kubi okwenziwa liqembu lenguqu ele Highlanders sekudale ukuba kube lokucabangelana okukhulu kunkokheli yaleliqembu ebikwa ilokudonselana kodwa okulandulwa ngabaqeqetshi bobabili uMdinda Ndlovu loBekithemba Ndlovu.
Nkhwenkwezi 13, 2019
Iqembu Labesifazana Emdlalweni weKhilikithi Liya Emncintisweni weScotland
Iqembu labesifazane elimela ele Zimbabwe, emdlalweni kakhilikithi, eleLady Chevrons, lithole ilungelo lokuyaphatheka emidlalweni eyeScotland ngemva kokunqoba kumncintiswano oqhutshelwe esigodlweni iHarare ensukwini ezisanda kwedlula.
Nkhwenkwezi 10, 2019
Imidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League Ingena Kuviki Yesikhombisa
Umqeqetshi weqembu le Highlanders uMadinda Ndlovu uthi akula mehluko phakathi kweqembu lakhe lele Chicken Inn lona abazangqikilana lalo kusasa ngoMgqibelo enkundleni ye Barbourfields.
Imidlalo Yenguqu eyeCastle Lager PSL Ingena Kuviki Yesithupha
Imidlalo yenguqu yesigaba se Castle Lager Premier Soccer League iqhubekela phambili kulimpelaviki iqembu le Highlanders lidinga ukunqoba okwakuqala selokhu kuqale imidlalo yalonyaka.
Mabasa 24, 2019
Sandra Ndebele: Angisitholanga Isicoco Kodwa Ngiyabonga Ngokuba yiNominee
Lezi zicoco ngezabakubhizimusi lokulibazisa uzulu ezifana lokucula, ukuhlabela lokwenza eminye imicimbi.
Kwenzakalani Kanti Kuqembu leHighlanders leleDynamos?
Amaqembu omdlalo wenguqu amakhulu athi el Highlanders leleDynamos aya eqhuba nzima emidlalweni yeCastle Lager Premier Soccer League.
IChicken Inn Inqotshwa Okwakuqala emidlalweni yePSL
Intathelizindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo edlalwe ngoLwesihlanu eyesigabeni se Castle Lager Premier Soccer League.
Zibe Ngutshiki Lobhanqa 2 ka 2 Phakathi kweMushowani Stars leFC Platinum
Iqembu lomdlalo wenguqu ele Mushowani Stars lihle laqala kuhle lonyaka ngokuba ngutshiki lobhanqa 2 ka 2 lentshantshu zanyakenye iqembu le FC Platinum .
Izigulane Zithwele Amagabha Avuzayo eZimbabwe
Abadabuka eZimbabwe Batshengisela Emigwaqweni eNew York Ngesikhathi uMnangagwa Efika eMelika